သူငယ်ချင်းဖုန်း ကိ်ို Bluetooth ဖြင့် Hack ချင်သူများအတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » သူငယ်ချင်းဖုန်း ကိ်ို Bluetooth ဖြင့် Hack ချင်သူများအတွက်
သူငယ်ချင်းဖုန်း ကိ်ို Bluetooth ဖြင့် Hack ချင်သူများအတွက်
Posted by Mobile House on Aug 10, 2011 in Computers & Technology, Myanma News | 16 comments
Bluetooth ဖြင့် သူငယ်ချင်း ဆီမှ File များကိုမသိအောင်ကူး ယူသော ဆော့ဝဲ။
Use your cell phone to browse, explore and manage files of any bluetooth ready device (File Transfer Profile – OBEX FTP)! Download, upload, explore, search, edit, create, delete and rename files and folders on your phone, PDA, palm, notebook, PC, photo viewer, music player and so on; using an easy, fast and intuitive user-interface (GUI). Transfer or delete many files and entire folders at once, withasingle keypress, using the multiple selection feature. Search files across filesystems, using rapid and customisable parameters. Explore hidden files, or make your personal data private and/or read-only, using the attributes editor (local filesystem only). Cut, copy and paste files and folder across filesystems. Save your favorite devices in the bookmark list, to speed-up the connection procedure.
သူ့ဖက်က bluetoothဖွင့်မှ ကူးလို့ရမှာလား
ဟုတ်ပါတယ် ။bluetooth ဖွင့်ပြီး pair လုပ်ရမှာ ပါ ။ java run တဲ့ဖုန်းဆိုသွင်းလို့ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်း ကို သီချင်းပို့ မယ်ဆို ပြီး ခဏ ယူလိုက် ပါ ။ပြီး ၇င် အဲ့application ထဲ က နေ ရှာပြီး pair လုပ်လိုက်ပါ ။ပြီး ရင်ဟိုဖုန်းက accept လုပ်ပေး လိုက် ပါ ။ပြီး ရင်ပြန်ပေးလိုက်တော့ ။သင် သူ မသိပဲ သူထဲက file တွေကြည့် လို့ ကူးလို့ရ မယ်။စမ်း ကြည့် ပေါ့ ရမှာပါ။
android တို့ symbian တို့ဆိုရင်ရော
ပြီးတော့ ကျွန်မအရင်သုံးတဲ့ ဟန်းဆက်က javaလည်းမဟုတ်ဘူး
smart phoneတဲ့၊ ယိုးဒယားက။
android အတွက်တော့ ရှာနေ ပါတယ် ။android မှာ java run အောင် လုပ်နိုင်ရင်တော့ သုံးလို့ရမယ် ။အဲ့ ဒါလည်းစမ်းနေ ပါတယ် ။ရ ခဲ့ ရင်တင်ပေးပါမယ် ။symbian မှာရပါတယ် ။java က အခြေခံပါ အားလုံးရဲ့ ။smart phone ဆိုရဖို့ များပါတယ် ။nokia ,sony တို့မှာ ရတာသေ ချာပါတယ် ။
သူ့ဘက်က bluetooth လည်း ဖွင့်ထားရမယ်၊ သူနဲ့လည်း pair လုပ်ပြီးသားမှ ရ မှာ လို့ ထင်ပါတယ်။
မိမိ ဖုန်းနဲ့ pair လုပ်မထားပါဘူး။ဒါပေမယ့်တဖက်ကဖုန်းက bluetoothဖွင့်ထားခဲ့ရင် သူ့ ဒေတာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုဝင်ကြည့်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ရှိဘူးလား။တခါကသူငယ်ချင်းကရှာကြည့်ပါ ရှိတယ်ပြောလို့ ပါ။pair လုပ်ပြီးမှ hack လုပ်ရပါမယ်ဆိုရင် hack လုပ်တယ်မည်ပါ့မလား။စမ်းကြည့်ချင်လို့ ပါ
ပြောရရင်အရှည်ကြီးပဲ ။bluetooth နဲ့ ပတ်သက်ပြီး app တွေရှိသေးတယ် ။bluetooth ကနေ massage ပို့တာပေါ့ ။ဒါကလဲဟိုဘက်ကလက်ခံမှရမှာ။ကျွှန်တော် ၁ခါ အအေးဆိုင်ထိုင်တော့ စမ်း လိုက် တာ ဟိုဖုန်းကို bluetooth နဲ့ massage ပို့လိုက်တယ် “plz pass password 1111 “ဆိုပြီး ဟိုကလက်ခံတာနဲ့ blue filemgr နဲ့ pair လှမ်းလုပ်လိုက်တာ ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ သူ့ထဲ မွှေတာပေါ့ ဟီး …
bluetooth massager ကို တော့ google ကပဲ ရှာ လိုက်ပါ လွယ်ပါတယ် ။
တော်ပြီတော်ပြီ … အကောင်းဆုံးက ဘလူးတု ပိတ်ထားလိုက်တာပဲ စိတ်ချရမယ်
ပိတ်ထားမှ မဖြစ်ချေဘူး ရွာထဲကလူတွေက လက်သွက်ပုံရတယ် …
မြန်မာနိုင်ငံက လူတစ်စုနဲ့ ဘာတော်ကြလဲမသိဘူး
အင်းမဆိုးပါဘူး။စမ်းကြည့်ပါမယ်။ပြီးလုပ်မရရင်တော့ထပ်မေးပါမယ်။လောလောဆယ်တော့ app ရှာလိုက်ပါဦးမယ်။မွှေစရာလေးရှိနေလို့ဟိ ဟိ။
ကောင်းပါတယ် ။ဖုန်း နဲ့ ကိုက်ရင် သူများဖုန်းကို လုံးဝ ထိန်းချုပ် လို့ ရတယ်။ တစ်ချို့ ဖုန်း ဆို pair လုပ်ပြီး run လိုက်တာ နဲ့ massage & ph book & call log တို့ ကို ကူးပေးထားတယ်။ကျွှန်တော်က sony နဲ့ စမ်းတာပါ ။ဖုန်းပါပိတ်လိုက်လို့ ရပါတယ် ။ ရှာ ပြီး စမ်းကြည့်ပါ ။mobile9 မှာ ရှိပါတယ် ။
အမ်၊ သူများကိုလည်းမမွှေချင်၊ ကိုယ့်လည်းအမွှေမခံရအောင်
cover လုပ်တဲ့ နည်းကတော့ မသိတဲ့ သူ ပို့တာကို လက်မခံ ပါနဲ့။virus လဲပါတက်တယ်။သီချင်းဆိုလဲ ပွားတဲ virus နဲ့ ရှိတယ်။သူငယ် ချင်း ဆီကကူးမယ်ဆို လဲကူးပြီးရင်bluetoothထဲ က pair device ကိုပြန်ဖျက် ပါ ။bluetooth ပိတ် ၊ဖွင့် က အရေးမကြီးပါဘူး ကိုယ်လက်မခံ ဖို့ပဲလိုတာ ။
မ ရှိသေး ပါဘူး ။hacker ဆိုရင်တော့ မပြောတက်ဘူးပေါ့ ။ဖုန်း ထုတ်တဲ့သူတွေ ကဖုန်းလုံခြုံ ရေး အတွက် ထည့်ထားတာပါ ။